Tsananguro: Gadziridza odhiyo Uchishandisa Chinyorwa | Martech Zone
China, Gunyana 19, 2019 China, Gunyana 19, 2019 Douglas Karr
Hazviwanzo kuti ndinowana mufaro nezve tekinoroji… asi Rondedzero yakavhura podcast studio sevhisi ine zvimwe zvinonakidza zvinhu. Zvakanakisa, mumaonero angu, kugona kugadzirisa odhiyo pasina chaiyo odhiyo odhita. Tsananguro inonyora podcast yako, iine kugona kugadzirisa yako podcast kuburikidza nekugadzirisa zvinyorwa!
Ndave anofarira podcaster kwemakore, asi ini ndinogara ndichitya kugadzirisa yangu podcast. Muchokwadi, ini ndakarega mamwe mabvunzurudzo anoshamisa achiwira munzira apo ruzivo rwuri mu podcast rwainetsa nguva… asi ini ndakanga ndisina nguva yekugadzirisa nekutsikisa pasati pasvika nguva yakatarwa.
Muchokwadi, kana ini ndikarekodha maminitsi makumi mana nemashanu podcast, zvinotora awa kana kana maawa maviri kunyatso kugadzirisa kurekodha, kuwedzera intros uye outros, kuitumira kunyorerwa, uye kuiburitsa online. Ini ndinotopotsa ndadonha kana ini ndikatsigirwa nezvakanyorwa zvishoma. Zvakadaro, iri svikiro rinoshanda uye ini ndine vateereri vazhinji zvekuti ini ndoda kuramba ndichienderera kumberi.
Rondedzero haisi yemupepeti chete, ndeye yose Podcast uye Vhidhiyo Studio chikuva. Kumwe kumwe kunakidza kugona kugona kunyatsoisa mazwi iwe aiwe usati wataura uchishandisa avo Overdub chimiro!
Zvimiro zveRondedzero Sanganisira
Indasitiri inotungamira kudhindwa - Rondedzero inobatana nevanyatso rondedzesa vanopa kuti uve nechokwadi chekuti unogara uchiwana chinyorwa chakanakisa ipapo.
Rongedza odhiyo kana vhidhiyo nekugadzirisa zvinyorwa - Dhonza uye udonhe kuti uwedzere mimhanzi uye kurira mhedzisiro. Vhidhiyo inogona kutumirwa kuFinal Cut Pro kana Premiere.
Shandisa Timeline Mhariri yekugadzirisa-kwakanaka nekupera uye nekugadzirisa vhoriyamu.
Rarama Kubatana - Yechokwadi nguva multuser yekugadzirisa uye kutaura
Multitrack yekurekodha - Rondedzero ine simba inogadzira chinyorwa chimwe chete chakabatanidzwa
Overdub - Ruramisa mazwi ako akarekodwa nekunyora chete. Powered by Lyrebird AI
Kubatanidzwa - Via Zapier, iwe unogona kubatanidza Rondedzero kumazana eanonyanya kuzivikanwa mawebhu webhu.
Kana iwe uchida kujoina iyo Rondedzero Beta, iwe unogona kunyorera apa:
Rondedzero Beta Chirongwa
Hat tip kune anoremekedzwa waanoshanda naye Brad Shoemaker pa Yakasikwa Zombie Studios yeiyo tsvaga!
Tags: adobe yekupedzisira akacheka proadobe premiereaichakagadzirwa njereAudioodhiyo edhishenitsananguratsananguro podcast studiolyrebirdLyrebird AIKushambadzira Vhidhiyopodcast mupepetipodcast studioPremierekudhindwa kwevhidhiyo